စက္ကူငွေကြေးမှ Cryptocurrency - အပိုင်း (၅ ) ( Henry Aung ) - Neoxian City
စက္ကူငွေကြေးမှ Cryptocurrency - အပိုင်း (၅ ) ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယမန်နေ့ကတော့ ဒဂုံတက္ကသိုလ် အတွင်ရှိ ကျွန်တော့ အစ်မ၏ မိတ္ထူ ဆိုင်အား သန့်ရှင်းရေး သွားလုပ်ပေးခဲ့ရသည်ဆိုတော့ စာရေးရန် အချိန်မရတော့ပါ။ ယနေ့ကတော့ အပျင်းထူနေသည့်တိုင် post လေးတခု ဖျစ်ညှစ် တင်ရန်ကြိုးစားရပါတော့သည်။ Cryptocurrency အကြောင်းသာ ပြောကြပါစို့။
ကျွန်တော်တို့၏ Hive ကလည်း ပြား ၅၀ အကျော်တွင် ရစ်သီ ရစ်သီ ပြန်လုပ်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း Hive ပြား ၅၀ သို့ ပြန်ရောက်လာသော ကြောင့်သာ Post တင်တရက် မတင်တရက် ဖြစ်နေကြသော်လည်း ရုတ်တရက် Hive ဈေး $5 ရောက်သွားပြီ ဆိုလျင်တော့ အားလုံး ပြန်နိုးထလာကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခု အချိန်တွင် Hive တခု နှစ်ခု ဟူ၍ အများကြီး တန်ဖိုးမရှိသော်လည်း Hive ဈေး $100 $200 ဆိုလျင်တော့ အများကြီး စကားပြောသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်အနေဖြင့် စဉ်စားကြည့်သည်မှာ လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၆ အချိန်တွင် ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Steemit ဖြင့် မတွေ့ခဲ့လျင် ယခု အချိန် ဘာများ လုပ်နေမည်နည်းဟူ၍။
သေချာသည်တခုကတော့ ကျွန်တော့အနေဖြင့် ဤ ဆုပ်ကိုင်စရာ ကောက်ရိုး တမျှင်မရှိခဲ့လျင် ယခုထက်ပို၍ စိတ်ဓာတ်ကျ ကာ လမ်းပျောက်နေမည် ဖြစ်ပါသည်။ BTC ဈေး တရိပ်ရိပ်တက်လာသော အခါ ကျွန်တော့ အစ်မလတ်ကတော့ပြောပါသည် ကျွန်တော့ Steem များအား BTC ပြောင်းခဲ့သင့်သည်ဟူ၍။
မှန်ပါသည် ကျွန်တော့အနေဖြင့် Steem များအား BTC ပြောင်းခဲ့လျင် ထိုအချိန်က Steem ဈေးဖြင့် ဆိုလျင် လည်း ဘယ်လောက်မျှ ရမည်မဟုတ်ပါ။ Steem မှ Hive သို့ ပြောင်းပြီး Hive ဈေး ပြား၂၀ ခန့်တွင် ကျွန်တော်တို့ Wallet တန်ဖိုးများ အင်မတန်မှ သနားစရာ ကောင်းနေခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော့ အနေဖြင့် BTC မကြိုက်ဘူးလား ဆိုတော့ ကြိုက်ပါသည်။ သို့သော် ရေရှည် အတွက် စုထားသည့် သဘောမျိုးသာ ပို၍ ကြိုက်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ BTC သည် Storage Value ရှိသော Cryptocurrency ဖြစ်သော ကြောင့် နှစ်ရှည် စုထားလျင် ပို၍ အကျိုးများသော Cryptocurrency ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ ၁၀ နှစ် ၁၅ နှစ် စုထားမည် ထိုအချိန် ထိ ဈေးတက်နေသေးလျင် ထုတ်ရောင်း၍ အိမ်ဝယ်မည် / ကားဝယ်မည် စသည်ဖြင့် ။ လက် ရှိ အချိန်တွင် BTC သည် ကျွန်တော်တို့ နှင့် အလှမ်း ဝေးသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း BTC စုရန် မဖြစ်နိုင်ပါဟူ၍ မရှိပါ။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိတ်ဆွေသည် သုံည ဟူသော အနေအထားမှ အချိန်တခု ရောက်သော အခါ Blockchain နည်းပညာ မှ နေ့စဉ် ဝင်ငွေရလမ်းတခု ဖွင့်ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုဝင်ငွေရလမ်းမှ ဖဲ့၍ BTC စုနိုင်ပါသေးသည်။ အချိန်တခုတော့ ပေးရပါလိမ့်မည်။
မိမိရသော HBD အား စု၍ BTC ဝယ်စုနိုင်ပါသေးသည်။ ဤတွင် မိတ်ဆွေက ရယ်ကောင်း ရယ်ပါလိမ့်မည်။ Hive မှ ရသည့် HBD က ဘယ်လောက်များ ရနေလို့လဲဟူ၍။ ကျွန်တော်တို့ ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ခြင်း မရှိပဲ Free Cryptocurrency လိုချင်သူများ အဖို့တော့ ဝရိယ စိုက်ရန် လိုပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် BTC အား နှစ်ရှည် စုမည်ဆိုလျင် မိမိတို့ BTC အား Exchange wallet တွင် မစုပဲ သီးသန့် Wallet တွင် စုထားစေချင်ပါသည်။
သီးသန့် wallet ဆိုသည်မှာ My Etherwallet / Electrum wallet / Bitcoin core စသည်ဖြင့် သီးသန့် wallet များ ကိုဆိုလိုပါသည် ။
2 FA များ email များ စကားစု စကားဝှက် များဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသော Wallet များမှာပို၍ ခိုင်မာပါသည်။ BTC သည် ယခုထက်ပို၍ ဈေးတက်သွားမည်လား ထိုးကျသွားမည်လား မည်သူမျှ မသိနိုင်ပါ။ သို့သော် လွန်ခဲ့သော လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်က BTC $၃၀၀၀ ကျော်ဈေးတွင် ဝယ်စုထားသူတို့ ယခုတော့ သူဌေးဖြစ်နေကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ မိတ်ဆွေအနေဖြင့် BTC စုမည် ဆိုပါက မိမိ အနေဖြင့် မည်သည့် Wallet ကိုရွေးချယ်ရမည်ဆိုသည်ကို သိလိုလျင် Bitcoin.org တွင် သွားရောက် စနည်းနာနိုင်ပါသည်။
မိတ်ဆွေသည် Cryptocurrency ကို လုံးဝမသိပါ စိတ်လည်း မဝင်စားပါဆိုလျင် ကိစ္စမရှိပါ။ သို့သော် မိတ်ဆွေသည် Cryptocurrency အားလည်း သိသည် သူ၏ တန်ဖိုး များအားလည်း သိသည် မည်သို့ အရယူရမည်ကိုလည်း သိနေပါလျက်နှင့် မိတ်ဆွေအနေဖြင့် ယခုအချိန်ထိ Cryptocurrency တမျိုးမျိုး အား စုထားခြင်း မရှိဘူးဆိုလျင် တချိန်တွင် ဤ Cryptocurrency များက မိတ်ဆွေအား နောင်တကြီးကြီးရစေပါလိမ့်မည်။
BTC/ Ethereum/ Hive မှ မဟုတ်ပါ။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ Cryptocurrency တခုခုအား စုထားစေလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Cryptocurrency အား ငွေကြေးဖြင့် ဝယ်ယူရန် မတတ်နိုင်ဘူး ဆိုလျင် လည်း အနည်းဆုံး Gaming post တင်ခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အပင်စောစောစိုက်သူများ အသီးစောစော စားရပါလိမ့်မည်။
18/05/2022 - Wednesday - 17;25 Pm
hive-122133 myanmar knowledge sharing leo archon neoxian proofofbrain creativecoin hivelist
@walarhein(2/4) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
@kachinhenry(1/1) gave you LUV. H-E tools | discord | community | <>< daily
အဟဲ ဘီတီစီတော့ မစုနိုင်‌ေတာ့ဘူး
နောက် ဟိုက်ဈေး ဒေါ်လာ၃၀၀ ဖြစ်ရင်
အငြိမ်။ စိတ်ကူးကောင်းချက်ပ ။
$၃၀၀ လောက်ဆိုရင်.... စိတ်ကူးယဉ် လို့ကောင်းလိုက်တာ😃 !PIZZA
BTCက ကျမအတွက်​တော့ အလှမ်း​ဝေးလှပါတယ် နီး​နေတဲ့ Hiveပဲ စုထားပါ​တော့မယ်!LOLZ
Hive လည်း အဆင်ပြေတာပဲ... ကြိုက်တဲ့ အချိန် BTC ပြောင်းလို့ရတယ်။ !PIZZA
kachinhenry tipped suhlaing (x1)
@kachinhenry(5/15) tipped @walarhein (x1)
golden.future tipped kachinhenry (x1)
ကျွန်တော် လိုက်မေးဖူးတယ် ...cryptocurrency စုမယ်ဆိုရင် Exchange wallet နဲ့ သီးသန့် wallet ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲလို့ပါ...ရေရေရာရာ တိကျတဲ့ အဖြေမပေးနိုင်ကြတာများတယ်...အစ်ကိုကတော့ တိကျတဲ့ အဖြေ ပေးသွားခဲ့ပြီ ...ကောင်းမွန်တဲ့ post လေးပါ...အပင်စောစောစိုက် ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေး သဘောကျစရာကောင်းပါတယ်အစ်ကို...!PIZZA
ပြင်ပ Wallet တွေက Exchange wallet တွေထက်ပိုပြီး Save ဖြစ်ပါတယ်။ !PIZZA
​Btc တော့ မရှိဘူးဗျာ။
လောလောဆယ်တော့ Hive ပဲ စုဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်